Russia inogumisa kurambidzwa kwendege dzinoenda kuRed Sea Red resorts
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Egypt Kudzokorora Nhau » Russia inogumisa kurambidzwa kwendege dzinoenda kuRed Sea Red resorts
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Egypt Kudzokorora Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kufamba kwemhepo pakati peRussia neEgypt kwakamiswa munaNovember 2015 mushure mekunge ndege yevatakuri yeRussia yarova pamusoro peSinai Peninsula ichiuraya vanhu makumi maviri nevaviri.
Chirevo chekurambidza kubhururuka nendege dzeRussia nendege kunzvimbo dzekugara dzeEgypt chakagadzwa muna 2015.
Mune yayo yazvino vhezheni, chirevo chaibvumidza chete dzinogara dzichienda kuCairo uye zvepamutemo nendege kuEjipitori.
Musi waApril 23 2021, vatungamiriri veRussia neEjipitori vakabvumirana kutangazve nendege pakati pemaguta eRussia nenzvimbo dzekuchengetera dzeGungwa Dzvuku.
Mutemo wemakore matanhatu unorambidza basa remhepo nendege dzeRussia kuenda kuEgungwa Red Sea nzvimbo dzekushanyira wakabviswa neChina neMutungamiri weRussia Vladimir Putin.
Mune yayo yazvino vhezheni, ikozvino yabviswa naPutin, chirevo chakabvumidza kungogara nendege kuenda kuCairo uye zvepamutemo nendege kuEjipitori. Yakanga iinewo kurudziro kune vashanyi vekushanya uye vamiririri vekufamba kuti varege kutengesa zvigadzirwa zvevashanyi zvinopa kufamba kwemhepo kuenda kuEgypt, kunze kweCairo. Iyi inorambidzwa haina basa uye haina maturo.
Kufamba kwemhepo pakati peRussia neEgypt kwakamiswa munaNovember 2015 mushure mekunge ndege yevatakuri yeRussia yarova pamusoro peSinai Peninsula ichiuraya vanhu makumi maviri nevaviri. Iyo Russian Federal Security Service (FSB) yakakwanisa chiitiko ichi sechiito chehugandanga.
MunaNdira 2018, Putin akasaina chirevo chinobvumidza kutangazve ndege dzakarongwa dzevapfuuri kuenda kuCairo, asi charter ndege kuenda kunzvimbo dzekuchengetera dzeEjipitori dzakaramba dzakadzorwa.
Musi waApril 23 2021, Mutungamiri weRussia Vladimir Putin nemutungamiri weEgypt Abdel Fattah el-Sisi vekuEgypt vakabvumirana kutangazve kuenda nendege pakati pemaguta eRussia nenzvimbo dzekuchengetera dzeGungwa Dzvuku.